what, when, why: Yahoo Messenger को Shortcut keys
Yahoo Messenger को Shortcut keys
याहू मेसेन्जर बिश्वकै धेरै मनिसहरु सदस्य भएको Instant मेसेन्जर हो र यो मेसेन्जर नै धेरै जसोले चलाऊने गर्छन् । आफ्नो साथी भाई , परिवार , आफन्त अथवा आफ्नो बिजनेस पार्ट्नरहरु सँग कम्प्युटर र ईन्टरनेट चलाऊने मान्छेले कुनै न कुनै बेला यसबाट कुरा गरेकै छन । याहू मेसेन्जर चलाऊने चलाऊन धेरै Shortcut keys हरु छन तर धेरै जसोलाई यो थाहा नहुन सक्छ । Shortcut keys कै प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो साथीहरुलाई Buzz , emoticon/smileys तथा अरु धेरै कुरा पठाउन र अरु काम पनि गर्न सक्नु हुन्छ र यि shortcut keys को प्रयोगले तपाईंको च्याट छिटो हुन्छ र समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले मैले यस्तै केही याहू मेसेन्जरमा shortcut keys हरु लेख्न लागिराखेको छु ।
ं Windows Key + Y = तपाईंको याहू मेसेन्जर system tray मा बसेको छ या तपाईंले याहू मेसेन्जर खोली राख्नु भएको छ र अरु काम गर्दै हुनु हुन्छ भने Windows Key + Y प्रेस गर्नु भयो भने मेसेन्जर Focus मा आउछ ।
ं Ctrl + G = च्याट गर्दा Buzz दिनु पर्‍यो भने ।
ं Ctrl + H = यसले तपाईंको मेसेन्जर लिस्टमा भएका offline साथीहरुलाई Hide गर्छ र online मात्र देखाउछ र फेरी Ctrl + H थिचेर पहिलेकै जस्तै फर्कन सकिन्छ ।
ं Ctrl + Shift + P = Preferences विन्डो खोल्नको लागि
ं Ctrl + M = तपाईंले च्याट गरी राख्नु भएको साथीहरुको लिस्ट लाई provid गर्छ ।
ं Ctrl + T = SMS मेसेज पठाउने option provid गर्छ ।
ं Ctrl + K = फोन no. कल गर्न option provid गर्छ ।
ं Ctrl + Y = ईमेल मेसेज पठाउन ।
ं Ctrl + Shift + A = नयाँ साथीहरु add गर्ने option provid गर्छ ।
ं Ctrl + Shift + 0,1 or2= याहू मेसेन्जर9र यो भन्दा माथिको मा यसले messaging formats चेन्ज गर्छ ।
ं Esc key = Active मेसेज विन्डो बन्द गर्छ ।
ं Ctrl + D = मेसेन्जर signout गर्नको लागि ।
ं Ctrl + Shift + D = याहू मेसेन्जर बाट signout र मोबाईल divice बाट sign in गर्न ।
ं Ctrl + Shift + F8 = आफ्नो Display इमेज चेन्ज गर्न ।
ं Ctrl + Shift + C = आफ्नो Contact info. active च्याट window मा पठाउन ।
ं Ctrl + Shift + M = Active च्याट window मा friend list पठाउन ।
ं Ctrl + Shift + R = Active च्याट window मा contact details request गर्न ।
ं Ctrl + B = च्याट window मा letter bold मा लेख्न वा हटाउन ।
ं Ctrl + I = च्याट window मा letter Italic मा लेख्न वा हटाउन ।
ं Ctrl + U = च्याट window मा letter Underline गर्न वा हटाउन ।
यस्तै तपाईंले च्याट गर्दा Emoticons पठाउन आफ्नो keyboard को प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ र हरेक Emoticons को छुट्टै छुट्टै code हरु हुन्छन जुन तपाईंले आफ्नो च्याट windows मा नै पाउन सक्नु हुन्छ र त्यहा भएका भन्दा अरु Hidden Emoticons हरुको लागि यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नु हुन्छ । ( hidden emoticons )
namaskar,,,,i have some probleme ,,,,,any software is not dodanload on my computer why ? that time say ''' your security dosenot allow for dowanload so what and where can i do to solve my probleme